Ombre လေးလိုဆိုးမလား? Lip Tint လေးလိုဆိုးမလား? Absolute New York ရဲ့ Lip duo လေးရှိတယ်နော် | CosmeticMyanmar
Home » Article » Ombre လေးလိုဆိုးမလား? Lip Tint လေးလိုဆိုးမလား? Absolute New York ရဲ့ Lip duo လေးရှိတယ်နော်
Ombre လေးလိုဆိုးမလား? Lip Tint လေးလိုဆိုးမလား? Absolute New York ရဲ့ Lip duo လေးရှိတယ်နော်
ချစ်တို့ရေ make up junkies လေးတွေအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းလေးတစ်ခုကတော့ Absolute New York Brand လေးက မြန်မာပြည်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ Absolute New York Brand လေးကတော့ အရည်အသွေးအကောင်းမွန်ဆုံးသော မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကို အမျိုးအစားစုံလင်စွာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Mid-end brand လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခု absolute ရဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ Perfect pair duo parfaint lipstick လေးတွေအကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Pair ဆိုတဲ့နာမည်လေးအတိုင်းပဲ နှုတ်ခမ်းနီတစ်ချောင်းတည်းမှာ lip liner ရော lip cream ရောပါတော့ budget အတွက်လည်းအဆင်ပြေ၊ creation look ကိုလည်းပြင်ဆင်နိုင်တာပေါ့။ သူ့မှာပါတဲ့ lip liner က lip cream ထက်ပိုအရောင်ရင့်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး lip liner လေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းကို ဘောင်လေးကွပ် ပြီးရင် lip cream လေးနဲ့ အတွင်းသားလေးကို ဆိုးလိုက်ရင်တော့ ချစ်စရာကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Ombre နှုတ်ခမ်းလေးကိုရပြီပေ့ါ။ ဒါမှမဟုတ် lip liner ကိုပဲ အပြည့်ဆိုးမလား lip cream လေးကိုပဲ အပြည့်ဆိုးမလား? အော် ပြီးတော့ lip cream လေးကို အပြည့်ဆိုးပြီး ကိုရီးယားမလေးတွေလို အတွင်းသားလေးကိုပဲ lip liner လေးနဲ့ ဖြည့်မလား? နှုတ်ခမ်းနီတစ်ချောင်းတည်းနဲ့ ပုံစံ ၄ မျိုးကို အလွယ်တကူဆိုးနိုင်တော့ ဘာလိုသေးလဲ။ Lip liner လေးကလည်း ဖိဆွဲစရာတောင်မလိုဘဲ အသားလေးဆွဲလိုက်တာနဲ့ အရောင်ထွက်အားကောင်းလွန်းပါတယ်။ Lip cream ရဲ့ texture ကလည်းပိုးသားလေးလိုနူးညံ့ပြီး နှုတ်ခမ်းကိုစိုစိုအိလေး ဖြစ်နေစေမှာပါ။ နှုတ်ခမ်းသားကို အစိုဓါတ်ထိန်းပေးတဲ့ lip care formula လည်းပါဝင်ပါတယ်။ ကဲ ဒီလိုကောင်းလွန်းလှတဲ့ lip duo လေးရဲ့ စျေးနှုန်းကတော့ ၁၅၀၀၀ တဲ့နော်။ တကယ်ကို ပေးရတဲ့ စျေးထက်သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးကို ရရှိမှာပါနော်။ အရောင်အနေနဲ့ကလည်း အရောင်အနုကနေ အရင့်အထိ မျိုးစုံရှိတဲ့ အတွက်ပျိုမေတို့စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိုင်ပြီး Absolute New York Myanmar Counter တိုင်းမှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အဆီကျ အသားအရေလှ အူရှင်းရာမှာ ဆရာကြီးတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ detox water ကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ကြမယ်